Global Voices teny Malagasy » Afrika: Fankalazana Ny Maha-Olombelona Amin’ny Alalan’ny Sary Sy Lahatsary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jolay 2012 16:52 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Afrika Mainty, Ejipta, Ghana, Ginea Ekoadaoreana, Madagasikara, Mozambika, Senegal, Sodàna, Zambia, Ady & Fifandirana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Saripika, Tontolo_iainana, Vehivavy sy Miralenta, Voina
Nanasongadina sary 21 izay hamerina indray ny fitokisanao amin'ny olombelona  ny lahatsoratra avy amin'ny BuzzFeed  izay lasa niparitaka be tao amin'ny Facebook miaraka aminà fifampizaràna maherin'ny 1.6 tapitrisa . Indrisy anefa fa tsy tao anatin'izany i Afrika sy ny Afrikana. Na dia eo aza ny ezaka ho amin'ny hanovàna ny tantara efa misy, fantatra na aiza na aiza amin'ny hoe toerana lohalaharana amin'ny fandraisana ny fanampiana iraisam-pirenena ary koa toerana izay ivantanan'ny ONG iraisam-pirenena mba ‘”hanavotana”‘ ireo vahoaka farofy eo an-toerana, ny kaontinanta Afrikana. Na dia tsy azo lavina aza ny filàna goavan'ny kaontinanta, dia matetika adino eo amin'ny tantaran’ ny vitan'olombelona, ny vitan'ny eo an-toerana dia ny tantaran'ny Afrikana manampy Afrikana. Nefa tsy ny fijoroana vavolombelona goavana amin'ny fisian'ny toe-panahy maha-olona avy amin'ny kaontinanta Afrikana akory no tsy misy. Ireto misy saripika sy lahatsary vitsivitsy maneho fa “manana Fo ihany koa i Afrika”:
Avy amin'ny Norman Carr Safari  any Zambia: “loharano fisotroan-drano ho an'ny biby eo an-toerana, ary koa toerana filomana fotaka ny Kapani Lagoon. Indrisy anefa, ratsy vintana ity zanaka elefanta iray niraikitra tao anaty fotaka raha nandeha teny amin'ilay lagoon vao tsy ela akory izay. Nanaitra ny reniny ny antson'ity zanany, izay nirifatra handeha hamonjy azy , nefa koa izy aza niraikitra tao anaty fotaka.”
Nitontona tany Madagasikara  ny rivo-doza Giovanna [fr] ny 13 Febroary 2012. Nosokajiana ho ambaratonga faha-4 ilay rivo-doza, miaraka amin'ny rivotra nentiny nahatratra hatramin'ny 194 km (120 mph) nandripaka ny hazo sy ny andrin-jiro. Nilaza ny manam-pahefana fa 10 raha kely indrindra no namoy aina . Tsy nanana jiro nandritra ny fotoana naharitra ireo tanàn-dehibe roa any Madagasikara, Antananarivo sy Toamasina, nanamarika ny andro maizina ho an'ny Mpifankatia tao an-toerana. Tsy nampihena ny zotom-pon'ireo Malagasy anefa ny rivo-doza, izay naneho ny risi-pony ary nifanampy mba hialàna amin'ny faritra tondra-drano, miaraka amin'ny tsikitsiky.
Atleta sy mafana fo avy any Ghana i Emmanuel Ofosu Yeboah . Teraka niaraka tamin'ny fahasembanana lehibe teo amin'ny ranjo havanana i Yeboah. Nahavita nandeha 380 kilometatra namakivaky ny fireneny i Yeboah mba hanaitra ny sain'ny olona ary koa hanova ny fijery ny sembana. Nanokatra ny Emmanuel Education Fund  izy mba hiantohana ireo mpianatra manana fahasembanana.
Mampiranty ny ONG eo an-toerana Bitonga Divers, izay miezaka miaro ny zava-mananaina an-dranomasina amin'ny “fanamboarana rohy tsara eo amin'ny fiarovana ny fiainana an-dranomasina, ny fizahantany, ary ny fampivoarana ara-toe-karena “, i Janet Gunter. Ity misy lahatsary ahitana ny asany[pt]:
Mpilomano avy any amin'i Ginea Ekoatorialy i Eric Moussambani Malonga  . Nanjary nalaza izy rehefa nandresy na dia mbola tsy nanao fifaninana maherin'ny 50 m mihitsy aza talohan'ny fifanintsanana voalohany, ary nampiana-tena raha toa kosa ka resy ireo mpilomano roa iray dobo taminy noho ny hadisoana teo am-piaingàna. Nilaza i Eric fa ny 15 m farany no tena sarotra taminy araka ny hita eto amin'ny lahatsary. Kanefa ny finiavany hamita ny fifaninanana, sady niady mafy tokoa dia nahazoany horakora-pihobiana avy amin'ny mpijery noho ny ezaka be nataony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/04/34664/
 izay hamerina indray ny fitokisanao amin'ny olombelona: http://www.buzzfeed.com/expresident/pictures-that-will-restore-your-faith-in-humanity
 lahatsoratra manokana mikasika ny hetsi-panoherana any Ejipta.: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2011-special-coverage/egypt-protests-2011/
 Norman Carr Safari: https://mg.globalvoices.orgwww.normancarrsafaris.com
 Nanaitra ny reniny ny antson'ity zanany, izay nirifatra handeha hamonjy azy: http://www.normancarrsafaris.com/cm/zambian_information/latest_news/dramatic_elephantrescue/
 Nitontona tany Madagasikara: http://planetevivante.wordpress.com/2012/02/14/cyclone-tropical-intense-giovanna-a-touche-terre-sur-madagascar/
 10 raha kely indrindra no namoy aina: http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94875
 fanamboarana rohy tsara eo amin'ny fiarovana ny fiainana an-dranomasina, ny fizahantany, ary ny fampivoarana ara-toe-karena: https://globalvoicesonline.org/2012/05/28/mozambique-diving-and-defending-marine-life/